ချစ်သူကကိုယ့်ကို ပိုချစ်လာစေမယ့်နည်းများ - eikoko's JimdoPage!
၁. Give time .. အချိန်ပေးပါ
ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို ကိုယ့်ရဲ့ အချိန်တွေထဲက မျှပေးဖို့ပါပဲ ၊ အတူ
ရှိနေနိုင်ရင်လဲ ရှိနေပေါ့ ၊ ရှိမနေနိုင်ရင်လည်း ဘယ်အချိန်မှာ လိုအပ်မလဲ
၊ သူလိုအပ်တဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်က အချိန်လေးပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစား
သင့်ပါတယ် ။ ချစ်သူတွေရဲ့ ကြားမှာ အချိန်မပေး နိုင်ခြင်းဟာလဲ ပြဿနာ
တစ်ခုပါ ၊ ဒါကြောင့် အချစ်ကို ပေးဖို့ ဆိုရင် အချိန်ကိုလဲ ပေးသင့်တယ်
ဆိုတဲ့ အချက်ကို သိထားသင့်ပါတယ် ။
၂. Give caring … ဂရုစိုက်မှုပေးပါ
ကိုယ့်ချစ်သူကို ဂရုတစိုက် ရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ၊ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူက
ဂရုတစိုက် ရှိနေစေချင်တာ သဘာဝပါပဲ ၊ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့မှာတော့ အမှတ်တမဲ့
ဖာသိဖာသာ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ် ၊ အထူးသဖြင့် သူရဲ့ ခံစားချက်တွေကို
ဂရုစိုက်ပြီး နားလည်ပေးဖို့ပါပဲ ။
၃. Give help … အကူအညီပေးပါ
ကိုယ့်ချစ်သူကို ကိုယ်ပေးနိုင်တဲ့ အကူအညီလေးတွေ ပေးဖို့ပါ ၊
အသေးအမွှားလေးတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ၊ စိတ်ခံစားမှု ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့
ထိရောက်ပါတယ် ၊ ကြင်နာမှု ကို ပြရာရောက်သလိုပဲ သူ့အတွက် ကြည်နူးပီတိ
၄. Give understanding and be happy နားလည်မှု ပေးပြီး ပျော်ရွှင်ပါစေ
ကိုယ်ချစ်သူကို နားလည်မှု ပေးပြီး ချစ်ပါ ၊ ချစ်တဲ့ နေရာမှာ
ကိုယ့်ချစ်သူဟာ လွပ်လပ်မှု ရှိစေဖို့ ဘောင်တွေ ကန့်သတ်ချက်တွေကို
ကျယ်ကျယ်လေးထားပေးပါ ၊ စည်းမျဉ်း ကန့်သတ်ချက်တွေက သိပ်ပြီး
ကျဉ်းကျပ်နေရင် အချစ်ခံရတဲ့ သူဟာ လွပ်လပ်မှု မရှိတဲ့ အတွက် အပြည့်အ၀
ပျော်ရွှင်နိုင်မှာ မဟုတ်သလို တခါတရံ မှာ စိတ်တောင် ညစ်သွားစေပါလိမ့်မယ် ။
၅. Give respect လေးစားမှု ပေးပါ
ကိုယ့်ချစ်သူဟာ ဘယ်လိုအခြေအနေ အဆင့်အတန်း မှာ ဖြစ်စေ ကိုယ်က ချစ်ပြီ
ဆိုရင်တော့ လေးစားမှုလေး ပေးပါ ၊ ကိုယ်က အရမ်း လွှမ်းမိုးနေတာမျိုး
မလုပ်ပဲ နဲ့ သူတည်ရှိနေမှုနဲ့ သူ့ရဲ့ အနေအထားလေးကို လည်း အသိအမှတ် ပြု
၆. Give attention ( Pay attention to details ) … အာရုံစူးစိုက်မှုပေးပါ
ကိုယ်ချစ်သူဟာ ဘာကို နှစ်သက်တယ် ဘာကို မနှစ်သက်ဘူး စတဲ့ အသေးစိတ်
အချက်အလက် လေးတွေက စပြီး သိထားပါ ၊ အာရုံစူးစိုက်ပြီး မှတ်သားပါ ၊
သူကြိုက်တာကို လုပ်ပြီး မကြိုက်တာကို မလုပ်ပါနဲ့
၇. Give gifts …. လက်ဆောင်လေးတွေ ပေးပါ
တခါတရံ မှာတော့ လက်ဆောင်လေးတွေ ပေးတာဟာလဲ အချစ်ကို ပြသရာ ရောက်ပါတယ် ၊
သတိရ ခြင်းရဲ့ အထိန်းအမှတ် အဖြစ်ပေါ့ ၊ လက်ဆောင်သေးသေးလေးတွေပဲ ဖြစ်ပါစေ
တန်ဘိုးထား တတ်ကြပါတယ် ။
အရာဝတ္ထု တိုင်းမှာ တန်ဘိုး နှစ်မျိုး ရှိကြပါတယ် ၊ အဲဒါတွေကတော့ material
value နဲ့ sentimental value တို့ပါပဲ ၊ material value က ပစ္စည်းရဲ့ မူလ
တန်ဘိုး ဖြစ်ပြီးတော့ sentimental value ကတော့ အဲဒီပစ္စည်း အပေါ်မှာ
ခံစားတဲ့ သူ့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ခံစားချက်ရဲ့ တန်ဘိုးပါ ။
ချစ်သူက ထီးလေး တစ်လက်ကို လက်ဆောင်းပေးတယ် ဆိုပါစို့၊ နေပူထဲသွားလို့
အဲဒီ ထီးလေးကို ဆောင်းတဲ့ အခါမှ ပိုပြီး အေးတယ်လို့ ခံစားရကောင်း
ရနိုင်ပါတယ် ၊ ချစ်သူရဲ့ အမှတ်တရ ဖြစ်မှု ၊ ချစ်သူရဲ့ အမှတ်သင်္ကေတ ၊
ချစ်သူရဲ့ စေတနာ စတဲ့.. စတဲ့ ခံစားရခြင်းတွေ ပူးပေါင်းပါဝင်နေတာမို့
အဲဒီထီးလေးကို … ရောင်းတဲ့ ဆိုင်ပေါ်ကအလားတူ ထီးတစ်လက် ထက်တော့ ပို
တန်ဘိုးထား ပါလိမ့်မယ် ၊ အဲဒီသဘောပါပဲ ။
ဒါကြောင့်မို့ ကိုယ့်အတွက် မပင်ပန်းစေမယ့် လက်ဆောင်လေးတွေ ပေးသင့်ပါတယ်
၈. Communication ဆက်သွယ်ပြောဆိုပါ
လူအချင်းချင်း ဆက်ဆံတဲ့ နေရာ မှာတောင် ပြောဆို ဆက်ဆံရေးဟာ အရေးကြီးပါတယ်
၊ ကိုယ့်ချစ်သူကို ကျတော့ ကိုယ်က ချစ်တဲ့ အကြောင်း ၊ သူဟာ ကိုယ့် အတွက်
လိုအပ်တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း စတာတွေကို ပြောပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ၊
တချို့သူများဟာ ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားကို ထပ်ခါ ထပ်ခါ ကြားချင်သလို သေချာ
စေချင်တဲ့ အတွက် မေးလဲ မေးလေ့ ရှိပါတယ် ၊ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ကတော့
ပုံစံချင်းမတူဘူးပေါ့ ၊ ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ ဆန္ဒကို လိုက်ပြီး
ကိုယ်ခံစားချက်ကို သိအောင် ပြောပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ၊ အပိုတွေကို ညာဖြီး
အာရွှီးဖို့ ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး ၊ ချစ်တဲ့ အကြောင်းကို ပြောဖို့လဲ
လိုအပ်တယ် ဆိုတဲ့ အချက်ကလေးကို စားရင်းတို့ ပေးလိုက်တာပါပဲ ။
လောကမှာ ဘယ်ယောက်ျားလေး၊မိန်းကလေးမဆို ဆန့်ကျင်ဘက်ချောတဲ့
ကောင်လေး၊ကောငိမလေးတွေတွေ့ရင် စိတ်ထဲက ဘာရယ်မဟုတ်တောင်
ကိုယ်ချစ်တဲ့သူဘေးမှာ ရှိနေရင် မလုပ်သငိ့ပါဘူး။ဒါဟာ ကိုယ့်ချစ်သူကို
မလေးစားရာ ရောက်သလို သူ့ရဲ့ အထင်သေးမှုကိုလည်း ရရှိသွားတတ်ပါတယ်…ဘယ်သူမဆို
ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်ကိုဘဲ ကြည့်စေချင်၊ချစ်စေချင်တာလေ…ဒီလိုဘာမဟုတ်တဲ့
အသေးအဖွဲတွေကလည်း ချစ်သူတွေကြားမှာ ဆူးနှောင့်လေး ဖြစ်တတ်တာမို့
ထည့်ရေးပေးလိုက်တာပါ..ဒီလို အသေးအဖွဲ ကြည့်တာလေးတောင် ရှော့ရှိနိုင်ရင်
ကိစ်စအကြီးကြီးတွေမှာ ပြသနာမဖြစ်ဖို့ သစ်စာရှိရမယ်ဆိုတာ ပြောဖို့
ဆိုလိုချငိတာက ကိုယ်ဟာလူ၁ယောက်ကို ချစ်မိရင် ချစ်တယ်လို့မပြောခင်
သူ့အတိတ်ကို လေ့လာပါ..မလေ့လာရငိတောင် ကိုယ့်အချစ်ကို
သူ့ကိုဖွင့်ဟမပြောခငိ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သေချာရဲ့လား သုံးသပ်ပါ။သေချာလို့
ဖွင့်ပြောပြီးပြီ၊ချစ်သူတွေ ဖြစ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ အတိတ်က
ကိစ်စနဲ့ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊လတ်တလော ကိစ်စနဲ့ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် အထင်လွဲစရာ ပေါ်လာတဲ့အခါ
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မေးပါ။နားလည်မှု ပေးပါ… ကြားစကားဆိုတာ တစိတ်ကို တအိတ်
လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ကြားလူတွေရဲ့ ပယောဂကြောင့် ဝေးသွားတဲ့ချစ်သူတွေ
လောကကြီးမှာ အများကြီးပါ။မိမိက အမေးခံရသူဖြစ်နေရင်လည်း ချစ်သူက မေးတဲ့အခါ
အမှားရှိခဲ့ရင်တောင် မည်သူမဆို ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့အကြောင်းကို
သူများပြောမှသိတာထက် ကိုယ်ချစ်သူကိုယ်တိုင် ဖွင့်ဟအသိပေးထားတာဘဲ
ကိုယ့်အကြောင်းအားလုံးပြောပြထားလိုက်ပါ။ ပြောထားပြီးပြီဆိုတော့ ကိုယ်လည်း
ကွဲကွာတာထက်စာရင် မိတ်ဆွေ အဖြစ်နဲ့ တသက်လုံးရင်းနှီးသွားတာကလည်း မင်္ဂလာ
ဒီအချက်က မြန်မာတော့ မဆန်ဘူး ၊ ဒါပေမယ့် ချန်ခဲ့ဖို့လဲ မကောင်းဘူး ၊
ဒါကြောင့် အောက်ဆုံးနားမှာ ထားပြီး ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
တခါတရံ အားငယ်နေတဲ့ အခါမျိုးမှာ တစုံတယောက်က လက်ကို
ဖျစ်ညှစ်ဆုပ်ကိုင်ပြီး အားပေးစကား ပြောလာတဲ့ အခါ အားရှိသွားသလိုမျိုး
ခံစားရဖူးပါသလား ၊ ပုခုံးဖက်ပြီး ပေါင်းလာကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ပါလို့
ပြောကြတာ ကြားဖူးပါသလား ၊ နွေးထွေးမှု ရင်းနှီးမှု စတဲ့
စိတ်ခံစားချက်တွေကို ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ထိတွေ့ မှုတွေကနေ တစ်ဆင့်
ရရှိနိုင်ပါတယ် ။ နှလုံးကနေ ထုတ်လွှတ်တဲ့ စွမ်းအင်တွေကို ထိတွေ့မှုတွေကနေ
တစ်ဆင့် ကူးပြောင်း ရရှိနိုင်တဲ့ အကြောင်းတွေကို ဂျာနယ်ထဲမှာ ဖတ်ရှုဖူးပါတယ် ။
ဒါကြောင့်မို့ လက်ကလေးကို ဆုပ်ကိုင်တာ ၊ ပုခုံးကိုဖက်တာ ၊ လက်မောင်းကို
ကိုင်တာ ၊ အကြင်နာပေးတာလေးတွေက အစပေါ့ ဒါလေးတွေကလဲ လိုအပ်ပါတယ် ။ အဓိက
ကတော့ ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာထက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြင်နာမှု
နွေးထွေးမှု စတဲ့ ခံစားရတာတွေကို ပြောချင်တာပါ ။﻿
Replica Louis Vuitton (Thursday, 22 December 2011 20:52)
<a href="http://www.replicalouisvuittonzone.com/">Replica Louis Vuitton</a> By white uniform as soon as possible into honey colored this isagood thing, if is the sudden emergence of quite shallow dirt may immediately processing! The best is South Korea and Japan, the most common student rubber, <a href="http://www.replicalouisvuittonzone.com/">Louis Vuitton Wallet</a> don't that tiger make it all sorts of little children Shape <a href="http://www.replicalouisvuittonzone.com/">Louis Vuitton Shoes</a> color, and even take candy taste of admire. Key is not to drop the kind of slag. I also reject the goods, South Korea, <a href="http://www.replicalouisvuittonzone.com/louis-vuitton-belt-c-2.html">Louis Vuitton Belt</a> but sometimes but they thing than domestic well. LV pack pack on the YuanZi <a href="http://www.replicalouisvuittonzone.com/louis-vuitton-2011-c-1.html">Louis Vuitton 2011</a> pen printed onceapencil eraser. But <a href="http://www.replicalouisvuittonzone.com/louis-vuitton-luggage-c-42.html?zenid=bs1ritk58314v92u83muota5c5">Louis Vuttion Luggage</a> want to notice, such trace to deal with immediate, don't extinguish <a href="http://www.replicalouisvuittonzone.com/louis-vuitton-scarves-c-30.html">Louis Vuttion Scarves</a> too long, long color has penetrated into cortex to go inside, <a href="http://www.replicalouisvuittonzone.com/louis-vuitton-shoes-c-4.html">Men shoes</a> there may bearubber invalid in addition to LV outside, other bright skin, coat <a href="http://www.replicalouisvuittonzone.com/louis-vuitton-belt-c-2.html">Louis Vuitton Belts</a> of paint, and canvas cloth or small dirt, too Can use rubber processing. According to ShengXiangJiao said <a href="http://www.replicalouisvuittonzone.com/louis-vuitton-scarves-c-30.html">Louis Vuitton Scarves</a> with friends <a href="http://www.replicalouisvuittonzone.com/">Louis Vuitton Boots</a> is also good, not to drop slag. <a href="http://www.replicalouisvuittonzone.com/">Louis Vuitton Cheap Bags</a> I haven't tried before.
North face jackets (Monday, 26 December 2011 02:21)
Cheap Designer Wallets (Wednesday, 01 February 2012 03:02)
Fake Oakley Sunglasses (Monday, 27 February 2012 02:15)
jonine005@hotmail.co.th (Tuesday, 20 March 2012 07:06)
Marcel (Thursday, 05 April 2012)
chawsu.loilem (Sunday, 10 June 2012 04:11)
ညီမ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ----
Cody (Sunday, 22 July 2012 04:50)
Nike NFL Jerseys Outlet (Monday, 17 September 2012 22:39)
Obd2 Multi-Diag Access Software (Thursday, 25 October 2012 21:50)
michael kors outlet (Tuesday, 30 October 2012 01:37)
Tory Burch Outlet (Tuesday, 06 November 2012 00:28)
women are invited to be present and to participate in the proceedings.
buytadalafilonline (Tuesday, 06 November 2012 18:12)
Microsoft Office 2010 (Thursday, 13 December 2012 20:58)
Your website there are too many not-so-good reviews! ! !
Coach Outlet Store (Thursday, 25 April 2013 03:37)
紅蜘蛛 (Monday, 05 August 2013 01:40)
ru486 (Monday, 05 August 2013 01:42)
威哥王 (Monday, 05 August 2013 01:44)
媚薬 (Monday, 05 August 2013 01:47)
sex telefon 24h (Monday, 16 January 2017 04:00)
seks telefon (Monday, 16 January 2017 05:13)